Northern Japan Special-SapporoKH – 6009
(Northern Japan Special-Sapporo) 7Days
Day : 1 Yangon – Sapporo (Lunch, Dinner)
Sapporo ရှိ Chitose လေဆိပ်သို့ လယာဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင်ရောက်ရှိပါမည်။
Day :2FURANO/BIEI(B,L,D)
မနက်စာကို ဟိုတယ်တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကျးလက် သဘာဝအလှအပတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေသော Furanoမြို့သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာပါမည်။ ဂျူလိုင်လတွင်လှပစွာပွင့်လေ့ရှိသော လာဗင်ဒါပန်းခင်းများကိုလေ့လာပြီးနောက်နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပါမည်။ပြီးလျှင်ကေ မြို့သို့ထွက်ခွာပါမည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက်Ashikawa Grand Hotelတွင်အိပ်စက်အနားယူမည်။
Day :3ASAHIYAMA/TWIN FALLS(B,L,D)
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးလျှင်Asahiyama တိရစ္ဆာန် ရုံသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။Asahikama Ramen Villageတွင် ဂျပန်ရိုးရာစာ များ ကို န လည်စာ အဖြစ်သုံးဆောင်ပါမည်။ပြီးလျှင်Twin fallsဟု၍နာမည်ကြီးသောGinga and Ryuseiရေတံခွန်သို့ လည်ပတ်ပါမည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူမည်။
Day :4SAPPORO TOUR (B/L/D)
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာသုံးဆောင်းပြီးနောက်ရောင်စုံ ပန်းခင်းကြီးများရှိရာ Shirou Koibito ပန်းခြံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ထို့နောက် ရှးဟောင်းသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးဖြစ်တဲ့Old K&H Travels No. 132, 2nd Floor, Bargayar Road, Sanchaung, Yangon.2Ph: 01-510338, 01-510057, 09-97271 9962 & 63 Hotline: 09-777 620 470,09-7777 044 30 Email: [email protected] Goverment Office သို့လည်းကောင်း၊ Sapporo မြို့ လယ်ခေါင်မှာရှိတဲ့ Odori ပန်းခြံသို့လည်းကောင်းသွားရောက်ပါမည်။ Sapporo မြို့  ဧ။်သင်္ကေတ ဖစ်တဲ့ Clock Towel သို့လည်ကောင်း၊ လှများဖြင့်သွားလာနေကြတဲ့ Otaru canal သို့လည်းကောင်း သွားရောက် ပါမည်။ ထို့နောက် ဖန်ထည်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာ Kitaichi glass factory သို့သွားရောက်လေ့လာရင်းအမှတ်တရ ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အချိန် ရပါက Susukino ခရိုင်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်သို့ပြန်ကာ အနားယူပါမည်။
Day :5NOBORIBETSU(B/L/D)
ရှေးဦးစွာ Noboribetsu ခရိုင်ရှိ Jikokudani အမည်ရှိ Hell valley သို့သွားရောက်ပါမည်။ထို့နောက် ဝက်ဝံ လးများကို စနစ်တကျ မွးမြူထားသော Showa Shinzan Bear Ranch သို့ သွားရောက်ပါမည်။ Laka Toya တွင်အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ ရိုက်ပြီး ဟိုတယ်သို့ပြန်ကာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :6CTS APT/DPT (B)
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာသုံးဆောင်းပြီးနောက်Check out လုပ်ကာ လေဆိပ်မှတစ်ဆင့်ရန်ကုန်သို့ ပန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။